Dzimwe nzvimbo dzebhizinesi | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rubric: Dzimwe nzvimbo dzebhizimisi
Mari inotora nguva yakareba sei paWebMoney
Inguva yakareba sei mari inoenda kuWebMoney Inowanzo, pakarepo, asi iwe unogona kutanga kutya pane rimwe zuva. Nguva yekuwana mari muhomwe yeWM mushure mokuzadza zvakanyanya kunobva pane nzira yekuzadzisa chikwama. Inokurumidza ...
Tsanangura, chinyorwa, zvakajeka, chii chinonzi kambani yehujini? Vanoitei?
Tsanangura, chinyorwa, zvakajeka, chii chinonzi kambani yehujini? Vanoitei? Imwe kambani inoda kutanga kubudisa michina mitsva, somuenzaniso, matsva matsva. Makore makuru ekugadzira maitiro haabvumiri, kana kurega zvishoma.
Chii chekuita nemigove yeOmobile All-Russian Alliance?
Chii chaunofanira kuita nemayero e "Automobile All-Russian Alliance"? Maererano naLyubov Lepshkina, ndaizokanda zvikamu zveGDP. OJSC AUTOMOBILE ALL-RUSSIAN ALLIANCE "(OJSC" AVVA ") Open Joint-Stock Company Automobile All-Russian Alliance (OJSC AVVA) yakavakwa ...
Binarium Ndiani angataura nezvenzvimbo yeBanarium, ichinhu chakaipa uye ndiani angachiwana?
Binarium Ndiani angataura nezvenzvimbo yeBanarium, ichinhu chakaipa uye ndiani angachiwana? Kwose kwaunokumbirwa kubhadhara muInternet - 90% kurambana, zviri nani zvishoma, asi ...
binary zvokusarudza - kurambana kana kwete?
Ndezvipi zviratidzo zvehupfumi hwemashamba nemamiriro ekushanda kwayo?
Ndechipi zviratidzo zvehupfumi hwemari uye mamiriro ekushanda kwayo? Ndinokutendai kirasi, pfupi uye yakajeka. Iine zvinhu zvinotevera: 1) ...
Ndiudzei tsanangudzo ye10 yezwi kushambadzira kubva kuvanyori vakasiyana-siyana
Taura tsanangudzo dzeC10 dzezwi Kushambadzira kubva kuvanyori vakasiyana-siyana Mune mabhuku, pane tsanangudzo dzakawanda dzekutengesa: Kutengesa rudzi rwemabasa evanhu rinotarirwa kusangana nezvido nezvinodiwa kuburikidza nekuchinjana. (Philippe Kotler) ...
Tsamba dzeMufaro PFR: State Criminal Code uye VEB CC
Tsamba dzomufaro PFR: STATE CC uye VEB UK Ndeupi mutsauko nyika yedu ichiri kunyengera isu uye inobva pasina mari yakawanikwa, saka yaiva nevabereki vedu nevabereki vavo, ...
Inguva yakawanda sei mutengesi mutengesi anowana?
Inguva yakawanda sei mutengesi mutengesi anowana? Izvi zvinogona kuitwa nenzira inotevera: iwe unotora madhora emamiriyoni e1, kugoverana mari pamadhora e-1000, kurasikirwa nezvinhu zvose kwemakore gumi. Zvino unoisa 100 bucks pa forex uye ...
Ndinoda tsanangudzo yemabasa yemutyairi SMP
Bhizinesi Center kirasi "A" Izvi ndizvo, uye zvakasiyana sei kubva mukirasi "B" ???
Bhizinesi Centre Chikoro "A". Ndizvo here, uye zvakasiyana sei nekirasi "B" ??? Chikamu-kirasi A Chikamu A mabhizinesi masangano anosanganisira zvivako zvinoenderana nezvinodiwa: 1. Nzvimbo Nzvimbo A bhizinesi nzvimbo dziri se ...
3 $ zvakadini mu rubles?
3 $ zvakadini mu rubles? 218, 79 $ 3 - zvakadini mu rubles? Central Bank of the Russian Federation on 11 June 2011. 1 USD ($ - US $) = 27,7907 RUIB ...
Chii chinotsanangurwa nebhizimisi
Ndechipi tsanangudzo yebhizimisi? Maererano neimwe yezvinyorwa zvemashoko echiRussia zvemazuva ano, kushandiswa kwebhizimisi ndiko kugadzirisa, kunosanganiswa nesimba uye zvinoita. Mune duramazwi raVa Dahl, munhu anokanganisa ane simba, ane ruzivo uye anoziva, ...
Chii chakanaka? Nditaurire ndapota zvinorevei zvinorehwa?
Chii chakanaka? Nditaurire ndapota zvinorevei zvinorehwa? Ngatitaurire. Unhu ihwu igadziro yemiti yakagadzirirwa kugadzirisa kudiwa kwekuteverwa nechinangwa chechigadzirwa. Mushure mezvose, chero chigadzirwa ndechekuunganidza kwezvinhu, ...
Ndinoda kutanga kutengeserana pane zvingasarudzwa. Sarudza mutengesi weOricus Trade. Ari seiko zvachose? Ndiani akatengesa?
Ndinoda kutanga kutengeserana pane zvingasarudzwa. Sarudza mutengesi weOricus Trade. Ari seiko zvachose? Ndiani akatengesa? Kurambana. Iwe unokwidza bheti uye zvinhu zvose zvinoita sezvakanaka uye zvakarurama pedyo nekuguma kwekutengesa kwako ...
sei kubvisa zvakaipa zvinyorwa pamusoro pekambani yangu?
sei kubvisa zvakaipa zvinyorwa pamusoro pekambani yangu? Mashoko paInternet chinhu chakaoma. Edza kusaita mafungiro akaipa pamusoro pako. Ndicho chakavanzika chose =) Ndakanzwa kuti zvino iwe unogona kuraira ...
Sberbank broker. Ini ndiri muchengeti weSberbank, ndingaitengesa sei kuburikidza nayo pakutsinhanisa?
Sberbank broker. Ini ndiri muchengeti weSberbank, ndingaitengesa sei kuburikidza nayo pakutsinhanisa? bhangi rakasikwa kuitira kuti rikande mari. Sberbank haina yake yekutengesa nzvimbo, ndiko kuti, kutengesa ...
Izwi rokuti operational cost
Izwi rinoshandiswa mari inoshandiswa Kuita mari yekushandisa ndiyo mari inoshandiswa nekushandiswa kwechinhu chinotora. Runyora rwakakwana rwezvinhu zvakadai mari haisati yasimbiswa nemutemo. Maitiro avo anotsanangurwa maererano nechose chimwe chinhu chinotora. Mariro ye ...
Mibvunzo ye100 mu database yakagadzirwa mu 0,828 masekondi.